Le nqubomgomo yobumfihlo ichaza izindlela idatha yomuntu siqu nolwazi oluqoqwa futhi lusetshenziswe ngalo lapho uvakashela iwebhusayithi ye Imidlalo.com.
Lapho usebenzisa isiphequluli ukuze uvakashele i-Imidlalo.com, imininingwane eminingi ingathunyelwa yisiphequluli sakho maqondana newebhusayithi yethu. Phakathi kwazo, izinto ezilandelayo zingatholwa yithi:
Ikheli le-IP - Le yikhodi enezinombolo ezi-4 ezisuka ku-0 ziye ku-255, ziqoqelwe ndawonye kusetshenziswa amachashazi (okuthile okufana ne-a.bb.cc.dd, lapho i-aa, bb, cc ne-dd kuyizinombolo ezishiwo ekuqaleni). I-IP eyodwa ihlotshaniswa nekhompyutha eyodwa kuphela exhunywe kwi-Intanethi. Kodwa-ke, ubuchwepheshe bamuva (ama-proxy server, njll) benze ukuthi bakwazi ukuzihlanganisa ne-IP eyodwa ngamakhompyutha amaningi, wonke aku-inthanethi. Kungenzeka futhi ukuthi uthumele ikheli le-IP lommeleli, esikhundleni sekheli lakho langempela le-IP.
Intambo yomenzeli womsebenzisi - le yintambo ecaciselwe isiphequluli osisebenzisayo. Ngokuya ngale ntambo, othile angathola ukuthi ngabe usebenzisa isibonelo inguqulo yakamuva ye-Internet Explorer noma cha. Ngokungeziwe, kanye ne-ID yokuhlonza isiphequluli, eminye imininingwane ingathunyelwa futhi, kufaka phakathi uhlelo lwakho lokusebenza, i-URL yekhasi olivakashele ngaphambilini njll.
Amakhukhi - lezo yizintambo ezigcinwa yiwebhusayithi yethu kudivayisi yakho yendawo yokugcina. Ungahle ukwazi ukumisa isiphequluli sakho ukuthi senqabe ukufinyelela amakhukhi, noma ukucela imvume yakho ekusebenzeni ngakunye okuhlobene nekhukhi. Amakhukhi asetshenziswa kakhulu ukusiza abasebenzisi ngokuqedela ngokuzenzakalela imininingwane yokufakazela ubuqiniso, noma ukukhumbula umsebenzisi ekuvakasheni okulandelayo kuwebhusayithi.
I Imidlalo.com iqoqa, kancane noma ngokuphelele, ezinye noma zonke izinto ezichazwe ngenhla. Inhloso enkulu yokuqoqa lezo ukudala idatha yezibalo ngokususelwa kuyo, okusisiza ukuthi sikhombe izindawo ezibalulekile ezihlobene newebhusayithi yethu (ngokwesibonelo, izindawo ezidumile noma izindawo ezingadinga ukwenziwa ngcono).
Ezinye izinhloso zibandakanya lezo ezihlobene nokuphepha kwewebhusayithi yethu kanye nokuhlaziywa kwabantu. Futhi, izinhlangano ezivela eceleni zisebenzisana nathi ukuze zinikeze izibalo, okunye okuhlobene nezikhangiso noma ezinye izinsizakalo zezivakashi zethu; lezi zinhlangano zinezinqubomgomo zazo maqondana nobumfihlo nokuqoqwa kwedatha; uyavuma ngokuphelele ukuthi inqubomgomo yamanje ayisebenzi kubo futhi uyavuma ukuboshwa yimigomo nezinqubomgomo zabo maqondana nolwazi oluqoqwa yilaba bantu besithathu bebodwa. Ungakhetha ukuphuma kumakhukhi asetshenziselwe ukukhangisa kokuziphatha kwenani elikhulu labathengisi bezinkampani zangaphandle ngokuvakashela ikhasi lokuphuma le-Network Advertising Initiative.
Ngezikhathi ezithile, singacela ikheli lakho le-imeyili ngezinhloso zokuqinisekisa, noma ngemisebenzi ehlobene nokuxhumana. Sinenqubomgomo yokungakubekezeleli nhlobo ugaxekile, futhi sigodle ukuthatha izinyathelo ezifanelekile ngokumelene nabasebenzisi abahlukumeza izikhungo zethu noma amasevisi ukuze sithuthukise, sikhuthaze noma empeleni sithumele imilayezo ye-imeyili yogaxekile.
Sinelungelo lokushintsha le nqubomgomo nganoma yisiphi isikhathi, ngesaziso noma ngaphandle kwaso.
Uma kwenzeka unanoma yimiphi imibuzo noma imibono mayelana nobumfihlo bakho noma mayelana nemigomo yale nqubomgomo yobumfihlo, zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi. Simagange ukuzwa iziphakamiso zakho.
Buyela ekhasini eliyinhloko
©2021 Imidlalo.com | Inqubomgomo yobumfihlo | Imidlalo.com ku BA, CN, CZ, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HI, ID, IS, IT, JP, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, RU, SL, SO, SQ, SV, SW, TL, TR, UK, VI